Transparent Face Mask China Manufacturers & Suppliers & Factory
 လျ：86-0755-23737136 အီးမေးလ်ပို့ရန်：ericzhang@tuwtech.com
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Distributor/Wholesaler , Manufacturer , Trade Company , Agent
ထုတ်ကုန်:71% - 80%
Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ >
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်သည်ရေခဲသေတ္တာ
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက်ရေခဲသေတ္တာ
Hydrofluoroether သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ >
အီလက်ထရောနစ် Precision သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
အရည် Crystal သည်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
Hard Disk ကိုများအတွက်ပျော်စေဖြေရှင်းချက်
ဒေါသကိုကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် nano Coating
Optical မှန်ဘီလူးသည် nano Coating
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်သည် nano Coating
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် nano Coating
ကြွေထည်သည် nano Coating
Glass ကို Rainproof အေးဂျင့်
Transparent Face Mask - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Transparent Face Mask ထုတ်ကုန်များ)
ထုပ်ပိုး: pp အိတ်
Supply နိုင်ခြင်း: 3000000 pcs per month
min ။ အမိန့်: 1000 Bag/Bags
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအပြည့်အ ၀ မျက်နှာဖုံး အကာအကွယ် Mask Shield ကိုအတွက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ၁။ သင့်လျော်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကာအကွယ်ပစ္စည်းများကိုဝတ်ဆင်ပါ။ splash mask ၀ တ်နေစဉ်မျက်မှန်တပ်ပြီးသို့မဟုတ်မျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး ၀ တ်ဆင်ပါ။ ၃။ မျက်နှာပြင်ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးပျက်စီးသွားပါကချက်ချင်းအစားထိုးပါ။ ၄။ MSA ၏...
အဆင့်မြင့်သားရေက Surface ကုသမှုအေးဂျင့်
Supply နိုင်ခြင်း: 100000KG/month
min ။ အမိန့်: 100 Others
leather စောင့်ရှောက်အေးဂျင့်လက်ခဏာ: 1.Effectively သားရေလောင်သောအသံတားဆီး။ 2.Deep အာဟာရ, သားရေမရှိပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။ ကုန်ပစ္စည်း Features: ဒီထုတ်ကုန်ပညာရှင်ပီသစွာအတုပွတ်တိုက်မှုနှင့်နေရောင်ထိတွေ့တဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်ခုံ, တဖြည်းဖြည်းပင်အက်ပျော့မူရင်းတောက်ပ, ဆုံးရှုံးမည်,...
ကားတစ်စီးခန္ဓာကိုယ် Paint Surface ကရေမှုံရေမွှား Crystal ဖယောင်းရုပ်ပန်းကန်
crystal ဖယောင်းရုပ်လက်ခဏာ: တောက်ပချောမွေ့, Anti-အစွန်းအထင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ခြစ်ရာ။ ကုန်ပစ္စည်း Features: ဒီထုတ်ကုန်မော်တော်ကားဆေးသုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်အသုံးပြုသည်မြင့်မားသောတောက်ပြောင်မြင့်မားခိုင်မာသော, Anti-အစွန်းအထင်းများနှင့်ဆန့်ကျင်ခြစ်ရာ, Ultra-ချောမွေ့,...
Womens Best Cheap Face Shield
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမျက်နှာမျက်နှာပြင်အပြည့်မျက်နှာပြင် Shield အကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးသည်အဓိကအားဖြင့်မျက်လုံးအကာအကွယ်အပါအ ၀ င်မျက်နှာတစ်ခုလုံးအတွက်အကာအကွယ်ပေးသည့်ပစ္စည်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ အကာအကွယ် mask တွင်အဓိကအားဖြင့်သက်ရောက်မှုမျက်နှာဖုံး၊ အပူချိန်မြင့်မျက်နှာဖုံးစသည်တို့ပါဝင်သည်။...
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသော Multi Use Face Shields
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် အချို့သောသူများသည်အလုပ်၏ထူးခြားမှုကြောင့်အချို့သောအန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများ (သို့) ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မိမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကျွမ်းကျင်သောအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးများကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ Protect mask...
အနောက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးမှ Flip-up Visor ဖြင့် Face Shield
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် မျက်နှာမျက်နှာဖုံးစစ်ခြင်းညွှန်ကြားချက်များကိုရှင်းလင်းပါ ： 1. ရှင်းလင်းသောမျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်သည်စွန်းထင်းနေသလား၊ ပျက်စီးသည်ဖြစ်စေစစ်ဆေးပါ။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မီရှင်းလင်းပါ ၂။ အကာအကွယ်အဖုံး၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ညှိနှိုင်းနေသည့်ခလုတ်များဆွဲထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ...
All-Purpose Face Shield Transparent Protect Mask
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောမျက်နှာအပြည့်မျက်နှာပြင် အသေးစိတ်: Thickness 0.25mm Wide 217mm Length 325mm Material PET Characteristic1 More protection, more effective, safe and secure. Characteristic2 High quality sponge strip, double-layer pet antifogging transparent sheet, safe, environmental...
ဂဟေဆော်ခြင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Face Shield
Flip-up ဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သောအပြည့်အ ၀ မျက်နှာဖုံး Mask Shield ၏ကောင်းကျိုးများ - ၁။ Mask Shield သင်၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ၊ တံတွေးများမျက်စိအတွင်းသို့ထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ပြီးကူးစက်လွယ်ပါသည်။ ကာကွယ်ပေးသောမျက်မှန်သည်မျက်လုံးနှင့်အရေပြားကိုကြာရှည်စွာထိခိုက်စေသည်။ ၃။...
Transparent Single Mask Shield Visor Protection
တစ်ခါသုံးသုံး Ply Ultralight Weight Face Mask ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ
Supply နိုင်ခြင်း: 3000000 pieces per month
min ။ အမိန့်: 100 Box
မျက်နှာမျက်နှာဖုံးအသွင်အပြင်များ: အကာအကွယ်အလွှာ (၃) ခု၊ ထိရောက်သောစီစစ်ခြင်း။ အလွှာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ အလွှာအလွှာမှကာကွယ်မှု၊ အန္တရာယ်ရှိသောစစ်ထုတ်ခြင်း၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊ ကျန်းမာသောအသက်ရှူမှုကိုကာကွယ်သည်။ 2.Face mask အရေပြားနှင့်ခင်မင်။...
10 Pcs Professional Disposable Face Masks
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးသည်လေကြောင်းမှကူးစက်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများမှကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများအားကာကွယ်ရန်သင့်တော်သည်။...
Semiconductor အဘို့အနိမ့် Surface ကတင်းမာမှုထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ
ထုပ်ပိုး: 25KG / စည်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
min ။ အမိန့်: 25kg Barrel/Barrels
Hydrofluoroether အနိမျ့ Surface ကတင်းမာမှုများနှင့်ထဲမှာပါတဲ့ဆပ်ပြာ Demiconductor Hydrofluoroether ဆပ်ပြာအီလက်ထရောနစ်အဆင့် Coating ပါးလွှာပွင့်လင်း Anti-စိုစွတ်စေသော, Anti-stiction ပေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ hydrophobic နှင့် oleophobic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူရုပ်ရှင်, Anti-ရွှေ့ပြောင်း, နှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်အများအပြား...
အနိမ့်တဲ့ Surface တင်းမာမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား
အနိမ့်တဲ့ Surface တင်းမာမှုဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှား [ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်သည် Nano Coating] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အဝါရောင် Transparent AF Coating
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက်အဝါရောင် Transparent AF Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating များအတွက်မျက်မှန်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။...
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းက Surface AF Coating
ဆောက်လုပ်ရေး Glass ကိုများအတွက် anti-အစွန်းအထင်းက Surface AF Coating [AF-အပေါ်ယံပိုင်းသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း...
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အအရောင်မဲ့ Transparent အရည်
ဖုန်း Touch ကိုမျက်နှာပြင်အဘို့အအရောင်မဲ့ Transparent အရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေ Coating ရေမှုံရေမွှားသတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည်
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည် [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း...
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် transparent AF Coating
Optical မှန်ဘီလူးများအတွက် transparent AF Coating [P ကို roduct သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း Non-hydrophilic နှင့်...
ဒေါသကိုကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည်
ဒေါသကိုကာကွယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက်အရောင်မဲ့ Transparent အရည် [P ကို roduct သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း Non-hydrophilic...
အင်ဗာ Controller များအတွက် transparent Fluorocabon ရေခဲသေတ္တာ
အင်ဗာ Controller များအတွက် transparent Fluorocabon ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene2doesn`t အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအင်ဗာ Controller dielectric အဆက်မပြတ်သည်ဖလိုရိုဒ်ဓာတ်ဖြေရှင်းချက်ဒေတာစင်တာကိုပလီကေးရှင်းကိုဆုံးရှုံးဒေတာလုပ် ကောင်းသောလျော့ပြေ, အင်ဗာထိန်းချုပ်ရေး Perfluorinated...
အင်ဗာပါဝါအဘို့အ transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်
အင်ဗာပါဝါအဘို့အ transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဓာတုအမည်: Perfluorohexene 300 ကျော်ကကီလိုမီတာ / ကဤမြန်နှုန်းမြင့်ရထားအင်ဗာတာများအတွက် h.Our အအေးအရည်ဝတ်စုံကို၏အမြန်နှုန်းသည်။ သူတို့ကနိုင်စွမ်းနှင့်ဆိတ်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရပေးကြသည်။ သူတို့ကမည်သည့်မြန်နှုန်းနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်စောင့်ရှောက်လော့။...
အင်ဗာ Controller များအတွက် transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်
အင်ဗာ Controller များအတွက် transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ဓာတုအမည်: Perfluorohexene Fluorocarbon ကစီးရီးမြင့်မားသော dielectric အဆက်မပြတ်၏ကြင်နာဖြစ်ပါသည်, နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အအေးအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအင်ဗာ Controller ၏အပူ-General ၏အအေးပေး စံပြဓာတုအာဂွန်,...
ဂီယာအုံများအတွက် transparent Dielectric Coating ပစ္စည်း
ဂီယာအုံများအတွက် transparent Dielectric Coating ပစ္စည်း TUWF-47 သုည ODP တန်ဖိုးနှင့်အနိမ့် GWP တန်ဖိုးထူးခြားတဲ့ HFC အရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမကြာခဏသန့်ရှင်းရေးလက်မဆေးနှင့်ရေနွေးငွေ့ degreasing ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ခြောက်သွေ့များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအများဆုံး application များအတွက်လက်ရှိ HCFC နှင့် FC...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် transparent ဖလိုရိုဖြေရှင်းချက် ထုတ်ကုန်၏ဤစီးရီး 25kg / စည်နှင့်အတူထုပ်ပိုးနေကြတယ်, သို့မဟုတ်ဖောက်သည်စိတ်ကြိုက်သည်။ ဤသည်ထုတ်ကုန်အလွယ်တကူသိုလှောင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေကြသည်။ စံပြဓာတုအာဂွန်,...
နယူးဓာတုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အေးနစ်မြုပ်
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဘို့လွန်ကျူးအပူအရည်ဖြေရှင်းချက်အေး
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကို 47 ဒီဂရီ Dielectric Coating
နျူကလီးယားပါဝါအဘို့အ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက်အရည် Coating ရေခဲသေတ္တာ
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်0င် ODP အရည် Coating
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက် 110 ဒီဂရီဖလိုရိုဖြေရှင်းချက်
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Perfluorinated အရည်
အင်ဗာဘို့ကို Safe ဓာတုအရည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကျန်းမာရေးအတွက် Earloop မျက်နှာဖုံးများ
အမေရိကန်တစ်ဦးက Message ပေးပို့
Transparent Face Mask Transparent Protect Mask Transparent Mask Shield Disposable Face Mask Sanitary face Mask best face mask Face Shield Transparent Face Masks 3-Ply
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Guangdong Giant Fluorine Energy Saving Technology Co.,Ltd All rights reserved ။